Ciidamada Liyuu Boolis oo dhaawacay Guddoomiyaha Degmada Wajaale +VIDEO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Ciidamada Liyuu Boolis oo dhaawacay Guddoomiyaha Degmada Wajaale +VIDEO
Wararka naga soo gaaraya magaalada Jigjiga ee xarunta maamulka Soomaalida Ethiopia, ayaa sheegaya in ciidamada Liyuu Boolis ee maamulka ay weerar ku qaaden Maareeyaha maamulka ee degmada Tog-wajaale qaybta Ethiopia ahna ku xigeenka duqa magaalada, Axmed-Khadar Cabdi Cali.
Axmed-Khadar Cabdi Cali, ayaa sheegay inay dhaawaceen ciidamada Liyuu Boolis, xili uu ku guda jiray howlihiisa shaqo, sida uu haddalka u dhigay.
Axmed-Khadar Cabdi Cali, waxa uu sheegay in weerarka lagu dhaawacay uu yimid kadib markii uu ciidamada Liyuu Boolis ka hor istaagay qaadashada gaari nooca dab damiska oo lagu caawinaayay dadka degmada.
Waxa uu sheegay in dhaawaca loo geystay uu yahay mid kasoo gaaray madaxa isla markaan ay xabadu dhexmartay hilibka madaxa.
Axmed-Khadar Cabdi Cali, wuxuu intaa ku daray in ay isla wakhtigaas u gurmanayeen qaylo dhaan uga timid xero ciidan oo loo sheegay in dhallinyaro ay rabshado ka wadeen, hase yeeshee uu dadaalkiisa ku muteystay dhaawaca loo geystay.
“Ciidamada Liyuu Booliska waxa ay dhaawac kadib xoog iiga qaaten dabdamiskii iyo alaab kaleba oo uu maamulka lahaa, dadkii ila joogay waxa ay qaarkood u geysteen dhaawacyo fudud”
Arrintaani ayaa imaaneysa xili deegaanada maamulka Soomaalida Ethiopia ay yihiin kuwo ay ka jirto xiisado colaadeed oo u dhexeeya Qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada, halka ciidamada Liyuu Boolis ay boob ku hayaan qeybo kamid ah hantida maamulka.